FFMM – ဂိမ်းလုံခြုံရေးမေးခွန်းများ
Free Fire သည်ကစားသူအားလုံးကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အချက်အလက်လုံခြုံမှုပေးစွမ်းနိုင်ရေးကိုအလေးထားပါသည်. လုံခြုံရေးအသင်းမှ, အင်ဂျင်နီယာများ, ဥပဒေဆိုင်ရာဆောင်ရွက်သူများသည်တွေ့ရှိသောမသမာနည်းတွေကိုအတူတကွကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမည်.
ဂိမ်းလုံခြုံရေးနှင့်ဆက်စပ်သောမေးခွန်းများအတွက်, ကျွန်ုပ်တို့ Terms of Service FAQ မှာကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်.
Garena မှထုတ်ပေးခြင်းမရှိသောတရားဝင်ဂိမ်းတွင်မရှိသောခွင့်ပြုချက်မရှိသောတတိယပါတီပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုခြင်း, ဂိမ်းသုံးစွဲသူ၏ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောဂိမ်းသုံးစွဲခြင်း.
Garena Free Fire အတွက်တတိယပါတီဆော့ဝဲလ်/apks/etc ကိုအဓိပ္ပါယ်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ?
Decompile လုပ်ရန်ကြိုးပမ်းသည့်မည်သည့်ဆော့ဝဲလ်မဆို, ဆန့်ကျင်ဘက်အင်ဂျင်နီယာ, ထုတ်ယူခြင်းသို့ဝန်ဆောင်မှုခိုးဝှက်ခြင်း (သို့၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ) သို့ မည်သည့်နည်းပညာခိုးဝှက်ကြိုးပမ်းမှု သို့လုံခြုံရေးအစီအမံကိုမဆိုအောင်မြင်ကျော်လွှားရန် Garena မှသိမ်းစည်းသည့်သို့ပြုလုပ်သည့် ဒေတာကူးပြောင်းခြင်းများကိုဆိုလိုသည်.
ဂိမ်းတွင်းသတင်းပို့မှုကိုသုံးပါ. သတင်းပို့မှုအားလုံးအကြုံးဝင်သည်, ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မသမာသူကိုပိတ်ပင်ရာတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်.
Free Fire ကမသမာသူတွေကိုဘယ်လိုအပစ်ပေးလဲ?
Free Fire သည်မူဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်သည့်လုပ်ရပ်ကိုလုံးဝသည်းမခံပါ. မသမာနည်းအသုံးပြုလျှင်၎င်းတို့အကောင့်ကိုရာသက်ပန်ပိတ်သွားမည်.
သင်ကလုံခြုံရေးသုတေသီဆိုပါစို့ ကစားသူမှအခြားကစားသူဂိမ်းကစားခြင်းလုံခြုံရေးပိုင်းအန္တရာယ်သို့လိမ်လည်ခြင်းကိုတွေ့ရှိသည်. သတင်းကောင်းကတော့, Garena သည်ရက်ရောမှုညွှန်ကြားချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန် Hckerone နှင့်လက်တွဲခဲ့သည် သင့်အားပါဝင်ရန်ကြိုဆိုပါသည်. သင့်ကြိုးပမ်းမှုကိုအသိမှတ်ပြုရန် သင်၏အကြံပြုခြင်းဂုဏ်ပြုရန်, ကျွန်ုပ်တို့မှ ကျိုးကြောင်းညီသော အရည်အချင်းမီသော သတင်းပို့မှုများကိုငွေကြေးဆုလာဘ်ပေးမည်. သင်၏လုံခြုံရေးသတင်းပို့မှုကို FFSecurity@garena.com သို့ပို့ပါ*. သတင်းမှန်ကန်ခြင်းအတည်ပြုပြီးလျှင်, ထိုဖိတ်ကြားစာသည် Hackerone ညွှန်ကြားချက်သို့ပို့မည်
သူတို့၏လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် လုံခြုံရေးကိုပြင်းထန်စွာအကဲဖြတ်သည်. ငွေကြေးဆုကလည်းပြင်းထန်သောအဆင့်အပေါ်မူတည်သွားမည်. ဤစာရင်းတန်းသည် ကုန်ဆုံးစာရင်းတွင်မပါဝင်သင့်ပါ.
အဆင့် 0: ပြင်းထန်အပြစ်
အဆင့် 1: အမြင့်ပြင်းထန်မှု
အဆင့် 2: အလယ်ပြင်းထန်မှု
အဆင့် 3: ပုံမှန်ပြင်းထန်မှု
အဆင့် 4: အနိမ့်ပြင်းထန်မှု
မလုံခြုံမှု၏အနက်ပေါ်မူတည်ပြီး,7- 25 ရက်ထိပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးကျိုးကြောင်းညီသောတုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်မည်.
ဂိမ်းဘက်ခ်များအတွက်, Free Fire ဝန်ဆောင်မှုဌာနသာဆက်သွယ်ပေးပါ